Hlobo luni lwebhayisikili elingifanele? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Hlobo luni lwebhayisikili okufanele ngithole imibuzo - incwajana ebanzi
Hlobo luni lwebhayisikili okufanele ngithole imibuzo - incwajana ebanzi
Hlobo luni lwebhayisikili elingifanele?
Uma uzohlala ku-pavement futhi ugibele ngokuyinhloko ukuzivocavoca umzimba, umgwaqoibhayisikilinoma ukuqinaibhayisikilikuyintokuhleukukhetha. Induduzo noma i-cruiseribhayisikili lingconongamahhashi amafushane, angajwayelekile nomndeni. Uma uzokwaziibhayisikiliikakhulu ukuhamba, idolobhaibhayisikililokhu okuhlanganisiwe akutholakalangaokuhle kakhulu; cabanga ngamamodeli asiza ngogesi wokuhambisa.
Yikuphi ibhayisikili elihle kakhulu ongalithenga? Um. Umzuzwana nje, empeleni. (Umculo we-Upbeat) Ngokuzimisela, lo mbuzo kunzima ukuwuphendula, hhayi ngoba kunzima ukuthola ibhayisikili elihle, kepha empeleni ngoba Ibhayisikili elihle kakhulu lincike ngokuphelele kuwe, umgibeli.
Esikhundleni sokubuza ukuthi yiliphi ibhayisikili elihle kunazo zonke, kufanele sibuze ukuthi ulithengela kanjani ibhayisikili elihle kakhulu? Iphuzu lokuqala ekuthengeni ibhayisikili lakho elihamba phambili empeleni iphuzu lokuqala lokuqinisekisa ukuthi lizifanele izidingo zakho. Manje ake sigxile kwimigoqo yokudonsa lapha. Uma ufuna ukuhamba ngomgwaqo, cabanga ukuthenga ibhayisikili lasentabeni.
Manje amabhayisikili e-cyclocross noma amabhayisikili amatshe anjengalawa ahlukahluka ngokumangazayo futhi amnandi kakhulu emgwaqeni inqobo nje uma ebushelelezi. Okwangempela, okukhokhiswa ngaphandle kwe-adrenaline ngaphandle komgwaqo, noma kunjalo, amathayi akhuluphele ebhayisikili lezintaba amane amnandi ngokwengeziwe. Awujwayele kakhulu ukuba namaqhubu namatshe nezimpande, ngakho-ke ushayela ngokunethezeka, ushayela ngokushesha futhi futhi li kancane. bazimisele ukuthola isondo eliqhuma.
Futhi-ke kuthiwani ngalawo magravel noma amabhayisikili e-cyclocross? Yebo zifana namabhayisikili wokugijima, yize zihamba kancane, sisanda kuyihlola futhi sathola ukuthi leli bhayisikili liba ngamakhilomitha amabili ubude yihora elihamba kancane kunaleli bhayisikili. Yebo, lokho kungenzeka noma kungabaluleki kuwe, kepha kuyiqiniso. Ngakho-ke uma ufuna ukugijima emgwaqweni, udinga ukuthenga ibhayisikili lokugijima.
Kukho konke okunye ngaphandle kwaleli bhayisikili lingaphelela. Ungavele ugone amathayi amakhulu, uhambe uhlola, ugibele imigwaqo emihle ongeke uyithinte ngepali yebarge, ngebhayisikili elinjengaleli. Lezi futhi ziqinile kakhulu ekuthinteni, ngakho-ke ungashayela ngenjabulo uye emsebenzini nsuku zonke ebusika nesihlalo sengane sinamathele emhlane wakho.
Kuwumsebenzi wangempela. Uma ucabanga ukuthi ababaningi bethu abagijimayo, kunengqondo ukuthenga ibhayisikili lomjaho? “Yebo, likhona impela iphuzu ekuthengeni ibhayisikili lomgwaqo. Ziyashesha, okusho nokuthi kulula ukuqhubeka nokuhamba y yize ngabe kuyisikhwama sakho.
Ziyasabela ngokwengeziwe, ziyaphila, zikhuphuka kangcono, zingaya ekwehleni kangcono, zingenza ngokuphenduka okuhle ngokuvikelekile. Yimoto encane yezemidlalo, kepha ngentengo ye-. Futhi empeleni, amabhayisikili amaningi okugijima angcono kakhulu ekugibeleni amatshe kunokuba ungacabanga.
Iphuzu elilandelayo elibalulekile, noma okokuqala asikwazanga ukunquma, ilungile, ibaluleke ngendlela emangalisayo ekutholeleni ibhayisikili elihle kakhulu. Manje akusadingeki ukuthi utshale imali ekulungiseleleni ibhayisikili elikhokhelwayo. Uma uthenga esitolo esaziwayo kufanele bakwazi ukukusiza uthole usayizi ofanele. kufanele, igxila ekuphakameni kwesihlalo.
Lokhu kulula kakhulu ukukushintsha. Ngakho-ke okunethonya elithe xaxa kulokho ibhayisikili elilungile ukufinyelelwa kwezibambo kanye nokuphakama kwawo. Ngakho-ke uma unesikhundla esifushane noma esiphakeme, kuzodingeka uthenge ibhayisikili elingakunika lokho.
Ngakho-ke ibhayisikili lomgwaqo lohlobo lokukhuthazela, kepha uma ukhetha indawo ende, enwetshiwe, kungenzeka ukuthi ungalitholi kahle ibhayisikili lokukhuthazela. Ngakho-ke kufanele ukhethe ibhayisikili lendabuko, elingasindi, noma elimise okwedolo. Esikhathini esedlule, engasindi bekuyikho konke futhi kugcina konke lapho uthenga ibhayisikili.
Amabhayisikili alula ayashesha. Noma, empeleni, kuze kwaqhamuka amabhayisikili e-aerodynamic, futhi ngokusemthethweni manje ashesha cishe kuzo zonke izimo zokugibela. Kepha futhi kuyabiza, ngakho-ke ukugcina amanani aphansi kancane kufanele kube yinto oyibheka kakhulu.
Njengoba ngishilo, amabhayisikili alula ayashesha futhi aphendule ngokwengeziwe, futhi asebenza kahle kakhulu. (umculo ojabulisayo) Kunezinketho ezine. Insimbi, i-titanium, i-aluminium ne-carbon fiber.
Noma ngubani angakhiwa abe yibhayisikili elihle, futhi wonke umuntu uzoba nabasekeli bakhe. Ngezabelomali eziphansi, isisindo sefreyimu kungenzeka sikukhathalele kakhulu. Ngakho-ke insimbi eshibhile iyasinda impela, kepha izwakala inzima ngempela futhi iqinile impela; i-aluminium ilula, bese kuthi i-carbon fiber, ngokuvamile ilula.
Ngenkathi abagibeli abaningi bezama ukugxumela kuhlaka lwe-carbon fiber ngokushesha okukhulu, ngivame ukucabanga ukuthi ibhayisikili lohlaka lwe-aluminium ngentengo efanayo imvamisa kuyisinqumo esingcono, futhi okuningi kwalokho kungenxa yesekethe. Amagiya abiza kakhulu athambekele ekusebenzeni kangcono futhi abushelelezi, aze afike cishe ku-1 000 euros, idola, uphawundi webhayisikili. Futhi ngemuva kwalokho bathola ukukhanya kuphela, ngaphandle kwamagiya kagesi, asebenza kangcono.
Bayakwenza, ngiyaxolisa. Manje inani lamagiya akufanele libe yinkinga enkulu kangako. Ngaphandle kokuthi amagiya ambalwa ngemuva ajwayele ukusho ukusebenza okubi kakhulu kanye nesisindo esithe xaxa.
Amasondo namasondo angathinta noma aphazamise ikhwalithi yokuhamba. Ngakho-ke isethi enhle, elula ingaba nomthelela oguqukayo kubhayisikili lakho. Ngakho-ke noma nini lapho uthenga entsha, qiniseka ukuthi unake lokho ekushoyo kuyo, futhi mhlawumbe wenze imihlatshelo kwenye indawo ngebhayisikili ukuthola isethi emnandi yamathayi, kwenzekani uma ibhayisikili osuzolithenga iza nesali ongayithandi, noma ngeziqeshana zezinzwane nemichilo? Uyazishintsha.
Yilokhu obeka eceleni ngesabelomali esithe xaxa, mhlawumbe ukuthenga isethi yamaphedali angenamakhilogremu noma ukuthenga ibha yokubamba enomumo ohlukile owukhethayo kungenza umehluko omkhulu kakhulu ebhayisikili. Ngakho-ke zama ukungadikibaliswa yingxenye noma okubili kwalokho okungaba ibhayisikili elihle kakhulu kuwe. Okungenani kukho konke, ukubukeka kwebhayisikili lakho, ubuhle balo.
Yebo, ngicabanga ukuthi kungakufanelekela ukuphakama ohlwini lwethu, noma ngabe kungazwakali kuyindlela enengqondo kunazo zonke yokukhetha ibhayisikili uma ukuthanda ngempela ukubukeka kwebhayisikili lapho lenza inhliziyo yakho ishaye ngokushesha njalo uma ubona it, liyibhayisikili elihle emehlweni ami futhi ungahle ulixolele ngakho konke ukushiyeka kwalo uma ulibona njalo uma ulibona, ufuna ukugibela ibhayisikili. Yibhayisikili elihle. Manje esigabeni sokuphawula ngezansi usazise ukuthi ucabanga ukuthi yibhayisikili elingcono kakhulu kuwe, kungani futhi liyini empeleni? Ngemuva kwalokho bhalisela i-GCN futhi.
Ukuze wenze lokhu, mane uchofoze embulungeni. Uma ufuna okuqukethwe okuningi okungakusiza unqume ukuthi yiliphi ibhayisikili elihamba phambili, sinendatshana enhle laphaya ethi Endurance Bike vs Arrow Bike vs Lightweight Bike. Noma, ngayo yonke le cyclocross vs.
Yimuphi umjikelezo olungele abaqalayo?
Abangu-12Amabhayisikili ahamba phambili kakhuluukuqala ukugibela manje
Okuhamba phambiliIdolobhaIbhayisikiliCo-op Idolobha 1.1.
Okuhamba phambiliIzingane IntabaIbhayisikiliCo-op IsAm 20.
Okuhamba phambiliIbhalansiIbhayisikiliI-Strider Classic.
Okuhamba phambiliI-Hybrid Cannondale Quick CX 3 yabesifazane.
Okuhamba phambiliI-Hybrid Cannondale Disc Yabesilisa esheshayo 5.
Okuhamba phambiliIDolobha Electric Aventon Pace 350.
Okuhamba phambiliICruiser Electra Lux 3i.
Okuhamba phambiliI-Townie Electra 7D.
Uthathe isinqumo sokuthenga ibhayisikili lakho lokuqala lomgwaqo, ngokumangazayo uthathe isinyathelo sakho sokuqala ezweni elikhudlwana, kepha ukuthenga ibhayisikili lakho lokuqala kungazwakala kukhungathekisa futhi kudideka njengoba kubonakala kuyizinhlobo eziningi ezahlukahlukene ezenziwe ngezinto ezahlukahlukene ezinezakhi ezahlukahlukene. pass, sinjalo kule ndatshana. Ngizokunikeza umhlahlandlela osebenzayo futhi ngikutshele kahle ukuthi yini okufanele uyibheke nokuthi yini umehluko. Ngikuthanda kakhulu ukuhamba ngebhayisikili, ngakho-ke noma yini eyenza abantu abaningi ngebhayisikili futhi yabelane ngalolo thando olungcono.
Kungakho sihlangane neDecathlon, banebhayisikili eliphelele elinezici eziningi ezahlukahlukene futhi bayigugu elikhulu lemali futhi, okusho ukuthi le yindawo ekahle yokuthi ngikukhombise konke okulandelayo futhi nami ngiyakudinga ikhayithi elisha le-kitesurf kanye nomcabango obulala izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Into yokuqala okudingeka uyenze ukunquma ukuthi ufuna ukusebenzisa malini, kepha ukuthi kufanele usebenzise imali engakanani kahle ayikho impendulo efanele Ukuphendula lowo mbuzo, noma kunjalo, uma kukhulunywa ngokuthenga ibhayisikili lomgwaqo, ungaqaphela ukuthi amabhayisikili emigwaqo esezingeni eliphakeme kakhulu aqala cishe ku-260 Oro noma ku- £ 250, njengale, bese kuthi njengoba uqhubeka nemali ethe xaxa amafreyimu ngokuvamile akhanya futhi aqinile futhi izingxenye ezikulezi zinhlaka zilula futhi ziyinkimbinkimbi ngama-euro angama-600 ungathola imali eningi yokwesaba ibhayisikili, into ejwayele ukuhlakanipha kakhulu enefreyimu ye-aluminium ezinye izinto ezisezingeni eliphezulu zokungena kunokuba mhlawumbe amabhuleki ediski namabhayisikili analolu hlobo lwezinto zokusebenza anekhono ngendlela emangalisayo, ngiyaqiniseka uyazi ukuthi. Izintaba noma i-Alps mhlawumbe nguwe futhi wenza izinhlanga ezimbalwa ngebhayisikili elolo hlobo lwe-spectrum engilwaziyo ngoba kukhona zonke izinto engizenzile ebhayisikili lami lokuqala lomgwaqo engingancoma ukuthi ungasebenzisi yonke imali yakho usebenzisa ibhayisikili wedwa, lokho kuhle kwisabelomali sazo zonke izesekeli ezibalulekile ezifana nezicathulo kanye nama-pedals, okokugqoka kanye nakho konke okudingayo, manje naka imininingwane embalwa lapho ukhetha ibhayisikili lakho, izinto ezinamathele kulo zivela esikhathini esihlangene samabhuleki kanye isekethe yiqembu manje kunabakhiqizi abahlukile beqembu iCampagnolo, i-SRAM microchip futhi mhlawumbe i-shimano edume kakhulu, okuthi kungakhathalekile ukuthi amasethi eqembu lomkhiqizo angena ngamazinga aphezulu noma amazinga, uma unyusa ama-hierarchies eqembu abiza kakhulu futhi izingxenye thola ukuxegiselwa okubiza kakhulu Imvamisa bathola amagiya amaningi ukusebenza okuthe xaxa okwenziwe ngezinto zokwakha ezingajwayelekile futhi Futhi amagiya agudlukayo azobushelelezi manje, amabhayisikili ezinga lokungena kanye nebhayisikili lomjaho wokungena s kuvame ukuhlinzekwa ngamasethi eqembu aphansi esigabeni sabaphathi, isibonelo esihle kakhulu iShimano Sora, okuyiqoqo leqembu lesibili leShimano futhi elisetshenziswa kakhulu emabhayisikili cishe inani lentengo lePound elingu-500 kutholakala ukuthi uShimano Sora angakhuphuka Isikhundla sabaphathi beqembu ibhayisikili lakhe lalinoShimano futhi ngalibhala izintaba kimi noma uCarall ngendawo engike ngagibela nayo ezinye izinhlanga kodwa enye yezinto ozoyazi Ukulinganiswa kwamagiya weqoqo leli bhayisikili line Ikhasethi elingu-1132 ngemuva, engingalincoma ngebhayisikili lakho lokuqala lomgwaqo, isizathu salokhu ukuthi leli giya lezinyo ezingama-32 ngemuva kwekhasethi liwusizo impela emagqumeni.
Lokhu kusho ukuthi ngokushintshanisa imilenze yakho ngaphezulu, ungathola i-cadence ephakeme, futhi kwenza amagquma abe mnandi kakhulu. Lokhu kuqhathaniswa namanye amabhayisikili afika nekhasethi elinzima kancane, futhi u-11: 28 unake futhi isethi yamaketanga nayo manje isinosayizi abahlukene bamaketanga, engingakutusa ngebhayisikili lakho lokuqala lomgwaqo i-compact chain set is a U-50: 34 unathi lapha futhi ngesizathu esifanayo ngincoma ama-32s, i-backit yenza nje amagquma abe lula uma usaqala. Vele uma ungumuntu oqala ukuhamba ngebhayisikili emgwaqeni futhi ufuna ukuba namagiya angakusiza ukukhuphuka izintaba ozifunayo, amabhuleki akhulunyiwe angemuva nangamakhulu amancane nawo ayingxenye yeqembu futhi kulo lonke kunezinhlobo ezimbili ezihlukene zamabhuleki eRim noma njengoba ubona kuleli bhuleki lediski lamabhayisikili futhi lawa mabhuleki abiza kancane nje kunamabhuleki erimu kodwa kuthiwani uma uhlala noma uzogibela endaweni enamagquma? endaweni enezintaba ngingasho ukuthi bawufanele umzamo owengeziwe ngoba banikela ngamabhuleki anamandla amakhulu, ahambisana kakhulu ikakhulukazi ezimweni ezimanzi futhi ngokuvamile anokulawula okungcono.
Kumele ngigcizelele ukuthi amabhuleki omugqa abawasebenzisile anele ngokuphelele ukunqoba iTour de France iminyaka eyikhulu futhi kusizakala ukuthi alula kancane kunalawa mabhuleki, ngoba impahla yohlaka inethonya elikhulu kuzinga lokugibela lilonke webhayisikili elinezinto zokwakha ezijwayeleke kakhulu i-aluminium, i-steel ne-carbon fiber cishe elingama-250 kufika ku- £ 1,000 noma amaRandi, amabhayisikili amaningi ongawathola enziwe ngama-aluminium alloys futhi lokho kuhle ngoba i-aluminium yinto eguquguqukayo kakhulu elula isilinganiso esihle samandla kuya kwesisindo, yingakho sisetshenziselwa ukundiza, kubuye kumelane nokugqwala kakhulu futhi kungenziwa ngezindleko eziphansi kakhulu kune-carbon fiber okusho ukuthi amabhayisikili ayabiza kakhulu kusuka kuma-euro ayinkulungwane ungaqala ukubona ukungena -level amabhayisikili e-carbon fiber afana nalawa vanreisel edr 105 noma ingoma Sang, njengoba besho ngaphambili, lapho sikhona njengamanje. I-Carbon fiber ivame ukuba lula futhi iqine kune-aluminium nokwenza insimbi yekhwalithi engcono yokugibela ikhabhoni kuyinto enhle yokwenza amabhayisikili kepha uma isabelomali sakho singagcwele i-carbon fiber ungakhathazeki ukuthi ibhayisikili lami lokuqala lomgwaqo laliyi-aluminium kepha isici esihle ukuthi ibhayisekili le-aluminium elinemfoloko yeCarbon fiber lokhu kwehlisa isisindo, kwenza imfoloko iqine kakhulu futhi kunciphise nokudlidliza komgwaqo futhi ukubhuza phakathi kwezibambo ezikhetha uphawu oluhloniphekile kuyalulekwa ngale ndlela wazi ukuthi ifreyimu yakhelwe kahle futhi yahlolwa futhi iwaranti eqinile kozimele bamathayi efanele ukunaka ukuvunyelwa kwamathayi kulapho i-merrier engingayisho khona ngoba lokhu kukunikeza ukuguquguquka okukhulu. Ungafaka amathayi abanzi uma uthanda, uma uthanda imigwaqo ephambukayo futhi une-adventure encane ungangeza izinto ezinjengezigada zodaka, izinsimbi zemithwalo nempahla yonke yezinye izesekeli futhi imininingwane yokugcina yohlaka kubakaki abaphansi - lawa amabheringi lapho iqoqo lamaketanga ngalinye elinamabhayisekili anokuthwala okungaphandle kokuthwalayo okungaphakathi okuhlanganisiwe lithola amaphuzu ebhonasi encwadini yami ngoba lokhu kuvame ukudinga ukunakekelwa okuncane futhi kuhlala isikhathi eside.
Manje ngikutshela ngamasondo e-Imean njengohlobo lwento esemqoka kuwo wonke amabhayisikili, manje amabhayisikili ezinga lokungena eza Ngokuvamile ngamasondo ezinga lokungena ngoba yiyona nto ethandwa kakhulu abagibeli bamabhayisikili abayithuthukisa ezansi nolayini. Bangena kakhulu emdlalweni futhi bavamise ukubashintshela entweni elula, eqinile, futhi mhlawumbe enamandla kakhulu, kepha ngalezi zindawo ezithuthukisiwe zokusebenza kuma-impellers zengeza izindleko ngakho-ke zigcina intengo iphansi, noma amabhayisikili ezinga lokungena eza ngevili elilula, kepha uma uhlola amasondo ibhayisikili lakho alifunayo nalokho engikuphakamisayo, kunenombolo yomusi ophakeme impela njengoba lokhu kusiza ekwenzeni isondo liqine futhi liqine kakhulu kungaphakamisa nokuthi ubheke ububanzi bomphetho. Ngokufanelekile ufuna amarimu alungele amathayi abanzi, ngakho-ke ububanzi berimu obubanzi obufana namathayi angama-25mm noma amathayi angama-28mm kunikeza induduzo ethe xaxa, ukubambelela kancane futhi futhi kunokumelana kokugudlika okuncane, okusho ukuthi ungagibela okufanayo isivinini ngomzamo omncane omncane.
Manje ngizokunikeza eminye imininingwane esheshayo okudingeka uyazi lapho uthenga ibhayisikili lakho lokuqala lomgwaqo. Amabhayisikili emigwaqo enzelwe ukuthi asetshenziswe ngezikhindi ezinamaphini, okusho ukuthi kuyinto ejwayelekile kubo ukuthi bazizwe bengakhululekile ngaphandle kwezikhindi ezinamaphini, futhi induduzo yesali iyinto yomuntu siqu futhi, ngakho-ke kujwayelekile ukuthi abagibeli bashintshe izinto kakhulu. Amabhayisikili amaningi okugijima awafiki nama-pedals, nakuba amanye amabhayisikili aphansi eza nombukiso we-pedal show.
Uma ugibele isikhathi eside noma wenza ezemidlalo ze-EOBs sincoma ukuthi uvuselele amanye amaphedali angenazicucu nezicathulo njengoba zikuvumela ukuthi ushelele phansi futhi udonse uhambo lokuhamba ukuze ukwenze uphumelele kakhudlwana, ungathola futhi amabhayisikili aqondene nabesifazane, sicela uthande ukwenza lokho ukuze ube nohlaka olufanayo kepha ube nezindawo zokuxhumana ezahlukahlukene ukwamukela umehluko wokwakheka phakathi kobulili, ngakho-ke uthola isali yesihlalo ekhethekile esisiqu esifushane nezimbambo kanye nezikhonkwane ezimfishane, kepha lokhu akudingekile neze. Sikukhuthaza ukuthi ukhethe okukulungele kakhulu. Ungaba nentshisekelo kumatshe amatshe noma amabhayisikili ahlanganisiwe.
Lawa ngamabhayisikili emigwaqo ngokushintshwa okumbalwa okwenza ukuthi kube nokusebenziseka okuningi ukuze ube nokuvunyelwa okukhulu kwamathayi, amathayi amakhulu evolumu akwazi ukusebenza kakhulu emgwaqeni, amagiya alula ungabona ukuthi i-sprocket enkulu ekhasethini lapha nama-disc brakes futhi lokho kusho ukuthi empeleni unebhayisikili lomgwaqo elinemigoqo yokudonsa eshesha kakhulu emgwaqeni kunebhayisikili lasentabeni kodwa futhi ungagibela kudoti noma imfucumfucu yomakoti, ongafuni ukuyenza ebhayisikili elijwayelekile lomgwaqo zilungele abantu izizinda ezixubekile ezifuna ukuzijabulisa, mhlawumbe ukupakisha amabhayisikili ambalwa, noma mhlawumbe umgibeli ongafuni nje ukuhlala emgwaqeni. Futhi ungashintshanisa amathayi amadala ngandlela thile emincane, ethambile futhi uthole ibhayisikili lomgwaqo ngingumlandeli omkhulu walezi zinhlobo zamabhayisikili, ibhayisekili lokungena ezingeni lokungena lihamba cishe amaphawundi angamakhulu amahlanu noma amakhulu ayisithupha ama-euro. Imihlambi yamakati yenze umsebenzi omuhle wokuthola ikhayithi lami elisha kodwa ithani lezinye izinto futhi kodwa ngikhohlwe ngokuphelele ukuthi ngiyayidinga uma uthanda ngiyijabulele le ndatshana futhi ngiyitholile ifundisa futhi sicela usinikeze ukuthanda nokulandela futhi manje usunqume ukuthi iyiphi ibhayisikili ofuna ukuba nayo ngenhlanhla sinezindatshana kulokhu kanye nethoni lokunye okuqukethwe kwabaqalayo okuwusizo kakhulu.
Ngiya ekhaya manje futhi ngidlala ngamathoyizi ami
Yini ibhayisikili elihle kakhulu lansuku zonke?
Okuhamba phambilii-hybridamabhayisikili abagibeli
U-Alibi okhethekile. $ 450.
Ukuphunyuka Okukhulu 3. $ 420.
UJames Coda S3. $ 500.
Imijikelezo Ehlanzekile Yasedolobheni-Ibhayisikili labagibeli. $ 499.
I-Kona Dew. 700.
Imijikelezo ye-Co-op CTY 1.1Ibhayisikili. $ 599.
Imijikelezo ye-Co-op CTY 1.1 Isinyathelo-ngokusebenzisaIbhayisikili. $ 600.
I-Special Crosstrail Hydraulic Disc. $ 670.
We bafowethu! Ngezimfanelo zamabhayisikili asezintabeni namabhayisikili wokugijima, amabhayisikili e-hybrid angcono kunawo wonke umhlaba. Njengoba zihlangabezana nezidingo zazo zonke izimo zokugibela, amabhayisikili e-hybrid angasetshenziselwa ukuzulazula edolobheni noma ukubhekana neminye imigwaqo enamagqubu. Kuyinto ehlukahlukene, kepha futhi ihlala isikhathi eside ukushaya noma iyiphi indawo, ngakho-ke sizobheka ezinhlanu kule ndatshana Senze lolu hlu lususelwa emibonweni yethu, ocwaningweni nasekubuyekezweni kwamakhasimende.
Sibheke ikhwalithi yabo, izici zabo, kanye namagugu abo ekunciphiseni izinketho ezinhle kakhulu. Uma udinga ulwazi oluthe xaxa futhi uvuselelwa Ngamanani entengo kumikhiqizo eshiwo, qiniseka ukubheka izixhumanisi ebhokisini lezincazelo ngezansi. Nawa amabhayisikili aphezulu amahlanu ahamba phambili.
Umkhiqizo wesihlanu kuhlu lwethu yiSchwinn GTX. ISchwinn GTX ibhayisikili elihlanganisiwe elihle emigwaqeni ehlukene. Inohlaka lwezemidlalo olubili lwe-aluminium futhi itholakala ngezinhlobo ezi-3 ezahlukahlukene ngokoqobo, okuyi-GTX1.0, i-GTX 2.0 ne-GTX Elite.
Th Leli bhayisikili lohlaka lwe-aluminium linzima ngokwanele ukuthi lingasetshenziswa kunoma yisiphi isenzakalo. USchwinn waklama leli bhayisikili ngokuphatha okuphendulayo nokusheshisa okusheshayo. Inamathayi ahlala isikhathi eside, lawo aphethe ngisho amaqhuqhuvana amancane emizileni I-Schwinn GTX nayo ifakwe uhlelo lokumiswa kwimfoloko engaphambili oludonsa izigaxa futhi luqinisekise ukuhamba kahle.
ISchwinn GTX inikeza ukuhamba okubushelelezi, noma ngabe kuhamba noma kumizila. Ukusetshenziswa komgwaqo. ISchwinn GTX ifakwe ibhuleki yomugqa wokudonsa futhi imisiwe kanzima.
Inamabhuleki ediski yomshini ngaphambili nangemuva. Ibuye ibe nama-21-speed Shimano trigger shifters kanye ne-derailleur yangemuva ye-Shimano. Ochwepheshe bayo yilena: * Kusezandleni zokubhekana nanoma iyiphi indawo inqobo nje uma ingeqisi; * Kuhle ngokuhamba nangezemidlalo; futhi * Ilula kunebhayisikili elijwayelekile lasentabeni.
Kodwa-ke, ububi yilokhu: * Isihlalo singabi mnandi ngemuva kohambo olude; futhi * Akuhloselwe ukusetshenziswa okweqile komgwaqo. Uma ufuna ibhayisikili elihlinzeka ngejubane nokushesha ngentengo engabizi, iSchwinn GTX ikulungele. Umkhiqizo wesine kuhlu lwethu yiSchwinn Network.
ISchwinn Network yibhayisikili elifanelekile lohambo olude oluzungezile. Yize isisindo sayo esincane, leli bhayisikili liqine ngokwanele ukwamukela abagibeli abade. Noma ngabe uya emsebenzini noma uhamba ngezokungcebeleka, leli bhayisikili elixubekile linikeza ukuhamba okulula, okubushelelezi nokunethezeka.
Leli bhayisikili line-Shimano EZ Fire shifter eyakhelwe ngaphakathi engama-21 eyakhelwe ukulungiswa okusheshayo nokusheshisa okwanele. Idizayinelwe ukuhlinzeka ngesipiliyoni sokushayela emigwaqweni egandayiwe, imigwaqo enamaqhubu ngisho namagquma amancane, ifreyimu, amarimu aphezulu namabhuleki wokudonsa aqondile enziwe nge-aluminium. Idizayini yayo ivumela abashayeli ukuthi bayishayele kalula, ibanikeze amandla okushesha nokushesha.
ISchwinn Network ifakwe ngamathayi angama-700c futhi ifaka phakathi iShimano 21-Speed ​​Revo TwistShifter ne-Shimano derailleur engemuva. Kuza nemfoloko yokumiswa ukuze uhambe kahle. Izinzuzo zayo yilezi: * Isiqu saso siyashintsha.
Kungabamba abagibeli bezindawo eziphakeme ezahlukahlukene ukuthi bathathe; * Kwenza ukukhuphuka kwamagquma kube lula; futhi * Ilula kunamanye amabhayisikili alolu hlobo. Okubi, nokho, yilawa: * Izintambo zeshubhu eziphezulu zingabambeka ezinkanjini zamabhayisikili ezimoto; futhi * Ayikwazi ukuphatha imizila eyeqile yomgwaqo. NgeNethiwekhi yeSchwinn ungajabulela uhambo olunethezekile futhi olusebenzayo.
Kuyibhayisikili elihle kakhulu lokugibela komakhelwane, endleleni yebhayisikili, noma ekuhambeni kwakho ekuseni. Umkhiqizo wesithathu ohlwini lwethu yi-reezero Pave n 'Trail yesithupha. IPave n 'Trail inikeza ukusebenza nokusebenza okuhlukahlukene.
Leli bhayisikili linikeza abagibeli abantofontofo ngoba liza nemfoloko yokuguqula izinto iVibrazord Front Suspension kanye namathayi aphikisayo okushushuluza ngamasentimitha angu-1.75 anentambo eyizingqabavu. Itholakala ngezinhlobo ezi-3: I-Network 1.5, i-Network 2 ne-Network 3.0.
Noma ngabe kungokungcebeleka noma ukungazithokozisi, leli bhayisikili likuvumela ukuba ugibele ngokushelela nangokuzinza. Iphinde iphelele nge-7-speed gearshift enezinqe eziqondile zamagiya zokuhamba ngokushesha nangokushesha. IPave n 'Trail ifakwe imfoloko yokumiswa ngaphambili kweVibrazorb eyehlisa ukudlidliza nokushaqeka endaweni engalingani.
Amasondo ayo abhinca amasentimitha angu-1.75 ahamba ngokushelela nangokushesha kupavumente, kuyilapho ukunyathela kwawo okuqinile kumunca imihuzuko ekungcoleni emizileni. Leli bhayisikili elihlanganisiwe liphinde lafakwa nge-21-speed Shimano trigger shifter.
Izinzuzo zayo yilezi: * Kuhle ekusetshenzisweni kwansuku zonke njengokuhamba nokuya ezindaweni ezithile; * Ingakwazi ukwamukela umthwalo wezandla ngenxa yokubeka kwayo ngemuva; futhi * Kulula. Okubi, nokho, yilawa: * Amathayi alo angabhekwa njengabanzi; futhi * Amashubhu akhe angaphakathi kwesinye isikhathi angahlelwa kabi. I-Sixthreezero Pave n 'Trail ilungile uma ufuna ibhayisikili elibushelelezi ongaligibela uye emsebenzini, usebenze izindlela ezithile, futhi uphinde uhlole nezindlela ezingekho mgwaqo.
Umkhiqizo wesibili ohlwini lwethu yiSchwinn Discover. ISchwinn Discover yenzelwe ukuhamba ngezindawo ezihlukene. Iza nohlaka lwe-aluminium kanye ne-aluminium crank system eguquguqukayo.
Yize kungesilo ibhayisikili lasentabeni, leli bhayisikili elixubekile lizibonakalisa liqinile futhi lizinzile, likwazi ukwenza imisebenzi eyahlukahlukene ezindaweni elihlangana nazo. Leli bhayisikili linikeza ukuhlukahluka kwejubane okungama-21, okwenza kube libhayisikili elisheshayo ongalisebenzisa emgwaqeni omkhulu omatasa wedolobha, indawo enolaka, noma indawo evulekile, enolaka. ISchwinn Discover ifakwe imfoloko yokumiswa ekwazi ukusingatha izigaxa nezindawo ezinamadwala.
ukuhamba ngebhayisikili nokuphakamisa izinsimbi
Awekho amakhono okushayela adingekayo lapho ugibela leli bhayisikili elihlanganisiwe njengoba kulula ukuliqhuba. Ine-21-speed SRAM grip shifter, i-alloy twist grip shifter ne-Shimano engemuva derailleur d gearbox carrier. Izinzuzo zayo yilezi: * Ama-fenders ayo avikela umshayeli ekungcoleni nasekuklwebhekeni; * Inikeza ukuhumusha okuhlukahlukene; * Isiqu salo esingalungiseka singahlalisa abagibeli babo bonke osayizi; futhi * Ingaphatha izinto.
Kodwa-ke, leli bhayisikili elihlanganisiwe lisinda impela. Uma ufuna ibhayisikili elingahlangabezana nezidingo zamathafa ahlukahlukene anenselele, iSchwinn Discover yibhayisikili ongethembela kulo. Ngaphambi kokuthi sinikeze inombolo yokuqala, bheka le ncazelo engezansi ukuthola amadili wakamuva entweni ngayinye yalezi zinto, futhi uqiniseke ukuthi ubhalisela uma ufuna ukuhlala usesikhathini ngemikhiqizo ephambili emakethe, ngemuva kwakho konke, i-hybrid yethu ephezulu ibhayisikili yilokho i-sixtyreezero EVRYuhambo.
Uma uthi nhlá, i-sixtyreezero EVRYjourney ibukeka njengebhayisikili elijwayelekile le-cruiser, kepha uma uyihlolisisa, libhayisikili le-hybrid elinemoto eyi-250 watt yangemuva futhi lisekela izindlela ezimbili: usizo lwephedali kanye nogesi ophelele. Emgwaqweni, ibhayisikili likwazi ukufinyelela ngejubane elifinyelela ku-24 km / h ngogesi ophelele. Ngosizo lwe-pedal, ingafinyelela ku-48 km / h, okusho ukuthi injini iyagijima ngenkathi inyathela.
Esihlalweni esingemuva uzothola ibhethri lamahora angu-250 watt elenzelwe ukusebenzisa i-b Kuze kube ngamamayela ayi-15 ngokushaja okugcwele. Ngokuhlakanipha kokuqamba, i-EVRYjourney ibhayisikili elihle kakhulu lokugibela okungajwayelekile. Kuyinhlanganisela ye-hybrid kanye ne-beach cruiser ene-geometry eyodwa ekhululekile, ekhululekile ebeka umzimba wakho endaweni emile.
Leli bhayisikili liqukethe umzimba we-aluminium ongena emzimbeni onamasondo ayi-1.95 ububanzi, amasondo abushelelezi. Ngenkathi ugibela ibhayisikili linikeza izilinganiso ezihlukile kusuka ku-1-speed, 3-speed, 7-speed futhi kufika ku-21-speed ngokuhlukahluka okusheshayo, kungakufinyelela lapho uya khona ngejubane elingasheshi kakhulu noma elisheshayo, kepha nge-cadence efanele ukujabulela ukuhamba ngokushelelayo.
Ibhayisikili elihlanganisiwe le-EVRYjourney lifakwe amathayi angama-26 x 2 inch whitewall semi-slick. Ine-7-speed Shimano Tourney ngemuva kwe-derailleur ne-7-speed Shimano Index Revo Shifter. Ngasikhathi sinye, ifakwe amabhuleki ediski angaphambili nangemuva kanye nenqola yemithwalo neziqaphi zodaka.
Izinzuzo zayo yilezi: * Inezinhlobonhlobo zamagiya: ukukhetha; * It has fenders ukuvimba ukungcola nokuklwebheka; futhi * Ingasetshenziselwa ukuhamba, noma kunjalo, ayilungele ukusetshenziswa okweqile komgwaqo, ngakho-ke uma ufuna ibhayisikili elilungele uhambo lwansuku zonke noma ukugibela okungajwayelekile futhi elikwazi ukuphatha imigwaqo embalwa emibi, khona-ke I-e-bike eyi-EVRYjourney e-bike ingenye yezindlela ezingcono kakhulu laphaya. Futhi lokho kuphela ngamabhayisikili ethu amahlanu amahle kakhulu emakethe. Bona incazelo engezansi ngezixhumanisi zolwazi oluningiliziwe kumkhiqizo ngamunye.
Futhi khumbula ukushiya amazwana ukuze usazise. Yilokho okwamanje. Siybaonga ngokubukela! Uma ngabe sikusizile nganoma iyiphi indlela sicela uchofoze izinkinobho u-'Like' no 'Bhalisa'.
Sobonana ezihlokweni ezilandelayo!
Ingabe ibhayisikili lama-20 libahle abantu abadala?
amashumi amabili'amasondo amabhayisikili amaBMX agibele izingane futhiabantu abadalababo bonke osayizi kepha ubuncane beminyaka yalesi sitayela seibhayisikilikungaba phakathi kweminyaka engu-7 no-8.
Sanibonani nonke futhi namukelekile futhi kokunye ukululeka kwangoLwesibili lapho sikhuluma khona ngosayizi ongakanani we-BMX noma ibhayisikili esizolisebenzisa ngokuya ngobude bakho kulesi sihloko. Nginenye indatshana ekhuluma ngazo zonke izici ze-BMX frame geometry. Kulokhu nje angikumbozi ukuthi yiluphi usayizi wozimele ngokuvamile olulungele uhla lwesayizi oluthile lomgibeli.
Yilokho esizogxila kukho namhlanje ngokugxila kubude beshubhu ephezulu, enye i-athikili ye-geometry yohlaka, ukubona ukuthi zonke ezinye izinombolo zisho ukuthini nokuthi zingaba namuphi umthelela ekuzweleni kwebhayisikili lakho, labo ukungena nje kwi-BMX noma ubuyele kuyo kuza, noma umuntu ofuna ukuthola ibhayisikili elisha noma ifreyimu entsha kodwa okwamanje akazi ukuthi bathanda usayizi onjani noma ukuthi kufanele babe usayizi onjani maqondana nokuphakama kwawo maqondana nobude yethubhu ephezulu ngakho-ke ake siqale ngomgibeli ukuphakama okungamamitha amane amasentimitha ayisithupha phezulu phezulu ngamasentimitha ayi-18 bese ukhuphuka usuka lapho, kepha ngokuhamba kwesikhathi ku-athikili ngizohlanganisa izindawo eziphakeme zabagibeli ezimfushane nezincane ngosayizi webhayisikili. Ngakho-ke hlala ubukele noma weqe uma ngabe yilokhu okudingayo ngakho-ke ake siqale ngobude bomgibeli obungamamitha amane kuya kwamane futhi ibanga lapha lingamasentimitha ayi-18 kuye kwangama-20 alicaba kubude beshubhu eliphezulu futhi kufanele ngithi sawubona Kink ngokwakha le midwebo eminyakeni edlule ngase ngiyibona muva nje eBMX Union ngathola umqondo wokukhuluma ngayo ngakho-ke uma umusha ku-BMX futhi ukulelo banga lobude, lolu luhlaka nosayizi webhayisikili okufanele ubheke ukukulingana ngokujwayelekile, sisuka lapho siya ku-1.20m kuya ku-1.50m kanti ubukhulu bukhona obungu-19.5 'top tube tube to 20.25' top tube ubude, ngakho-ke ngaphambi kokuthi sikhulume ngebhayisikili eliyi-18 Inch nangebhayisikili elingu-20 intshi sikhuluma ngama-20 amabhayisikili ama-intshi lapha ngoba ithubhu ephezulu yobude obungu-19.5 amayintshi ilungele amabhayisikili angama-intshi angama-20 angamamitha amahlanu amasentimitha amathathu kuya kwamamitha amahlanu amayintshi ayisithupha ukusuka lapho.
Yilapho ufika khona ungamasentimitha angama-20 uyisicaba ngobude beshubhu ephezulu iye kumasentimitha angama-20.5 ubude beshubhu ephezulu futhi uma ufuna ibhayisikili elisha sha leBMX ungathola iJiyomethri yohlaka okungenani ubude beshubhu ephezulu ku- iwebhusayithi yomkhiqizi webhayisikili Ukuthenga ibhayisikili elisha le-BMX ngoba usayizi webhubhu ephezulu ongakwesokudla ungenza umehluko omkhulu kuwe lapho ufunda ukugibela, ikakhulukazi uma uqhathanisa nento emfushane kakhulu futhi encanyana kakhulu noma into ende kakhulu futhi kukhulu kakhulu ukuba nosayizi webhayisikili elifanele kwenza izinto zibe lula, kunokuhamba usuka ku-1.5 unyawo uyokuya ku-1.70 unyawo ayisishiyagalolunye usayizi weshubhu ephezulu enconyiwe ingu-20.5 kuye ku-20.75 ngobude obungu-20,6 kuya ku-21 wamasentimitha aphezulu, bese kuba ngamamitha ayisithupha kanye no-20.75 futhi nokuningi.
Ngalolu hlu lwamamitha ayi-5 11 kuye ku-6 nangaphezulu, ngivame ukuncoma into enjengobude obungu-intshi engama-intshi angama-21, futhi uma uyigibela futhi uzizwa ngathi udinga okuthile okude. Ngingancoma ngisho nokuya ngaphezu kwalokho, ikakhulukazi uma unamamitha ayisithupha amabili amathathu amane amahlanu futhi ayisithupha kanye nabagibeli abambalwa abathanda lobo bude noma kungani kunezinhlaka zeBMX ezingaphezulu kuka-21 zingama-intshi futhi njengoba usondela ku-2m ubude kungenzeka kufanele ucabangele ibhayisikili elingu-22 'noma elingu-24', elinamasondo amakhulu futhi ngokuvamile elilingana kangcono kubantu abade kunabafana Abancane sinobubanzi obusayizi bamamitha amabili amasentimitha amabili kuya kumamitha amathathu isicaba, bese kuba yithubhu ephezulu noma usayizi webhayisikili isincomo samasentimitha ayishumi nambili kuya kwayishumi nambili nohhafu bese sinezinyawo ezintathu ezinyaweni ezintathu kuya kwezintathu ezinyaweni eziyisikhombisa zamasentimitha ayisikhombisa nesincomo samasentimitha ayi-14 kuye kwayi-14 .5, bese sidlulela endaweni ejwayelekile ye-BMX, njengokunye futhi izinkampani eziningi ziqala lapha ngokukhiqizwa kwamabhayisikili aphelele noma amabhayisikili aqondene ngqo ne-BMX.
Sinebanga elisuka ezinyaweni ezi-2 amayintshi ayi-11 amayintshi kuya ku-3 feet 10 inches amayintshi uhlobo lwendawo enkudlwana ngonyawo oluphelele futhi ubude beshubhu ephezulu lapha bungamasentimitha angu-16 uyisicaba kuya kuma-intshi ayi-16 nohhafu, ngakho-ke unalokho engqondweni, yilokho kuphela esiyikho maqondana nesidingo sokumboza izincomo kodwa kunento ebengifuna ukuyiqinisekisa ngalokhu engikubhalile lapha futhi ngethemba ukuthi iningi lenu lisekhona ngoba lapho nigibela iBMX kulapho nizofunda khona, amaqhinga amaningi nizofunda Ngabe uzothuthukisa isitayela sakho futhi uthole ukuthi yini othanda ukuyigibela, kuze kufike eDirt Street Park mhlawumbe uthanda yonke into, mhlawumbe uyayithanda ingxenye ethile yayo, lokho kulungile ngoba konke kungu-freestyle, kepha lapho ugibela ngokwengeziwe uyafunda, lapho ufunda okwengeziwe ngizofunda ngakho ngokwami ​​futhi lapho uzofunda ukuthi usayizi webhubhu ephezulu oyithandayo nokuthi yiziphi ezinye izici ze-BMX frame geometry oyithandayo ngebhayisikili lakho ngoba zonke zinethonya elilodwa, kodwa uma uqala funda ukugibela abanamthelela omncane ngoba ufunda izisekelo nje, ufunda ukulawula ibhayisikili. Ngakho-ke into ebaluleke kakhulu ukuthi ube nebhayisikili elilingana nosayizi wakho. Ngethemba ukuthi le ndatshana izosiza ngalokho, kepha kukhona ezinye izinto ongazithola ukushintshanisa ibhayisikili lakho noma ushintsho kubhayisikili lakho elingathinta indlela ibhayisikili elizizwa ngayo njengokuthola ithubhu ephezulu ende enesiqu eside lingalingisa kahle, kepha enemiphumela ehlukile nemiphumela kokuhlangenwe nakho kokugibela njengesiqu eside futhi kuthinta nokuqondiswa kwebhayisikili lakho i-athikili emayelana ne-geometry yesiqu se-BMX ungayibuka kuleli kona lesikrini futhi ngakho konke izici ezahlukahlukene zifunde ukuthi kufushane ubude be-tube ephezulu banele kunalokho, i-gentler fork offset izoletha i-wheelbase yakho kude nokulinganisa ukulinganisa ithubhu ephezulu futhi kuthinta ukuqondisa futhi ngine-athikili nge-fork geometry ekhuluma ngakho konke, uzothola ekhoneni lapha.
Kukhona okuhlukile 'okuyinkimbinkimbi kakhulu'. Manje njengoba usukwazi konke lokhu, ungaya ku-athikili ye-geometry yohlaka bese ubona ukuthi kusho ukuthini konke lokhu kukala futhi ungahlala ufunda kabanzi ngokuthuthukisa isitayela sakho sokubhala kwe-BMX futhi uthole ukuthi yini oyithandayo nokuthi yini ekufanele. Ngalokho kusho, ngithemba ukuthi ufunde okuthile lapha.
Ngiyethemba ukuthi iyakusiza, ungazise emibhalweni uma ikusiza futhi ngethemba ukuthi ngabe 'umusha lapha noma awukakachofozi inkinobho ethi' Bhalisa 'ngenkathi uphansi lapho, sizokubona kusasa ngomunye umbhalo
Ngingawalahla yini amafutha esisu ngokuhamba ngebhayisikili?
Ingabe ibhayisikili lishisa amanoni? Yebo. Yize eyakho i-isisuimisipha ayisebenzi kanzima njenge-quads yakho noma i-glutes lapho ugibele, kodwaamabhayisikiliImvelo ye-aerobic isho ukuthi uyashaamafutha.
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kunciphisa amafutha esiswini?
Yebo,ukuhamba ngebhayisikilikungasizaulahlekelwe ngamafutha esiswini, kodwa kuzothatha isikhathi. Ucwaningo lwamuva lubonise njaloukuhamba ngebhayisikiliingahle ithuthukise konkeamafuthaukulahleka nokukhuthaza isisindo esinempilo. Kuukunciphisaisiyonkeisisuibhande, ukuvivinya umzimba ngokulingene, njengeukuhamba ngebhayisikili(kungaba ngaphakathi noma ngaphandle), kuyasebenza ukwehlisaisisindo samafutha.
Ungalahlekelwa isisindo esingakanani imizuzu engu-30 ngosuku?
IHarvard Medical School ibika umuntu ongamakhilogremu ayi-155canshisa ama-calories angama-260 agibele umsebenziibhayisikilingoba njeImizuzu engama-30. Umuntu ongamakhilogremu ayi-125ngabebashise ama-calories angama-210 ekusebenzeni okufanayo, ngenkathi umuntu ongamakhilogremu angu-185ngabeashise ama-calories angu-311.27.04.2019
Ingabe ukuhamba ngebhayisikili kukunika ibhamu elikhulu?
Ukuhamba ngebhayisikilingekengikunikeze isibunu esikhulu, kodwa kungenzekangikunikeeyakheke kahle ngokwengeziwe ngenxa yezinzuzo zayo ze-cardio nezokwakha imisipha.Ukuhamba ngebhayisikiliisebenza imilenze yakho kanye glutes, ikakhulukazi laphowenabayakhuphuka, kepha kuyakhuphukakuyakwenzaingahlali isikhathi esanele nomahlinzekaukumelana okwanele ukwakhaenkuluimisipha.
Ngabe imizuzu engu-20 yokuhamba ngebhayisikili ngosuku ilungile?
TOumjikelezo wansuku zonkeukugibela kweImizuzu engu-20kwanele ukuhlalauphilile. Okuvamileukuhamba ngebhayisikiliisiza ekushiseni cishe ama-calories ayi-1 000 ngesonto, ngishoukuhamba ngebhayisikilingejubane elincane le-12 mph kuzokusiza ukuthi ushise ama-calories angama-563 ngehora, kusho ucwaningo. Ukungasebenzi ngokwanele kungenye yezinto eziholela engcupheni yokufa emhlabeni wonke.12.08.2017
Uyazi ukuthi hlobo luni lwebhayisikili elikulungele kakhulu?
Mhlawumbe wazi kahle ukuthi yiluphi uhlobo lwebhayisikili lomgwaqo elikulungele kakhulu futhi ucabanga ukuthi lokhu kuwubuwula. Bese uthatha imibuzo bese usazisa ukuthi ngabe siyitholile (noma ayilungile kabi)!
Hlobo luni lwebhayisikili okufanele ngilithenge kumibuzo?
Isikhathi sokuyeka ukuzibuza, bese uqala ukuthatha le mibuzo, okuqinisekile ukukukhomba endaweni efanele! Mhlawumbe kufanele uthenge okuthile okumibalabala, nebhasikidi ukusiza ukuthwala zonke izinto zakho ukuzizungeza. Noma mhlawumbe udinga okuthile okuphezulu, njengokuqeqeshelwa imarathon Lokhu kuhlolwa akusekelwe kunoma yiluphi ucwaningo lwesayensi.
Hlobo luni lwebhayisikili okufanele ngilithenge ngokugijima?
Mhlawumbe kufanele uthenge okuthile okumibalabala, nebhasikidi ukusiza ukuthwala zonke izinto zakho ukuzizungeza. Noma mhlawumbe udinga okuthile okuphezulu, njengokuqeqeshelwa imarathon Lokhu kuhlolwa akusekelwe kunoma yiluphi ucwaningo lwesayensi. Yenzelwe ukujabulisa kuphela ngakho-ke ungawuphathi ngokungathi sína umphumela :)
izinzuzo zemifino ye-cruciferous